गायक भागीरथ चलाउनेको आज जन्मदिन ! कति वर्षमा लागे ? - Jagaran News Jagaran News
Published On :6April, 2021 3:33 pm
पार्वती पाठक, काठमाडौं, चैत २३ । लोक तथा दोहोरी गायक भागीरथ चलाउनेको आज जन्मदिन ! सल्यान सिद्ध कुमाख गाउँ पालिका २ मा आजकै दिन उनी जन्मीएका थिए । आजको यस विषेश दिनमा उनले आफुलाई जन्मदिने आमा र बुवालाई निकै सम्झेको बताएका छन् । आज कति वर्षमा लाग्नु भयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा हास्दै उनले खुलाउन भने चाहेनन् ।
लोक गीत संगीतको क्षेत्रमा करियर शुरु गरेका गायक चलाउने पछिल्लो समयका चर्चित गायकका रुपमा गनिन्छिन् । कस्लाई सोध्ने होला देखि लिएर भर्खरै मात्र पछिल्लो समय निकै चलेको सबैको मन मुटुमा बसेको गीत फलाम पिटे तरबार जस्ता थुर्पै गीतमा उनले आफ्नो सुमधुर आवाज दिएका छन् ।
उनका गीतलाई सा्रेता दर्शकले निकै रुचाएका छन् । उनले आज आफ्नो जन्मदिन नजिकका आफन्त तथा साथि भाइहरुसंग मनाउने भएका छन् । हाम्रो तर्फबाट पनि तपाई भागीरथ चलाउनेलाई जन्मदिनको धेरै भन्दा धेरै शुभकामना ! आगामी दिनमा गीत संगीतको यात्रामा अझै सफलता प्राप्त होस ।